Antsirabe : Tra-tehaka ny sokatra sy ny vola sandoka 10 tapitrisa Ar -
AccueilSongandinaAntsirabe : Tra-tehaka ny sokatra sy ny vola sandoka 10 tapitrisa Ar
Antsirabe : Tra-tehaka ny sokatra sy ny vola sandoka 10 tapitrisa Ar
Mitohy ny hazalambo ataon’ny mpitandro filaminana ireo olona nanaparitaka vola sandoka teto Antsirabe. Taorian’ ny nahatratrarana lehilahy iray nahitana vola sandoka efa 10 tapitrisa Ariary dia niampy indray ny olona voasambotra, ka nahitana sokatra kely ampolony maro koa tao an-tranony.
Ny talata lasa teo no efa nahasamborana lehilahy iray tompon’antoka tamina fanaparitahana vola sandoka teto Antsirabe. Efa maty paika ny teti-dratsin’ity lehilahy iray manaparitaka vola sandoka ity. Apetrany eny amin’ireny kioska mikirakira vola amina orinasan-tserasera ireny ny vola sandoka, avy eo mifindra toerana hafa izy hakany ny vola madio. Ankoatra izay dia mampiasa ireo vola tsy izy ireo koa ingahirainy amina toerana fialamboly, toerana farany izay nahatratrarana azy satria nisy nahatsikaritra ny asa malotony. Nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany ireo nahafantatra fa vola sandoka no ampiasainy. Niroso tamin’ny fisamborana ny mpitandro filaminana taorian’ny nahafantarana azy. Rehefa nosavaina ny tranom-bahiny nisy azy dia nahitana vola sandoka 10 000 Ariary maro be, izay mitotaly 10 tapitrisa tao aminy, ankoatra ny efa naparitany teto Antsirabe sy ny toerana hafa. Niroso ny fanadihadiana ka nanoro ny namany hafa io rangahy voasambotra io izay tsy eto Antsirabe fa any Ampefy soavina Antananarivo. Rehefa natao ny fisavana ny tranony dia mbola nahitana vola sandoka 20 000 Ar miisa 17 ihany koa tao an-tranon’io lehilahy io, ankoatra izay dia nahitana sokatra kely maro be manodidina ny 50 isa tao amin’ny trano fonenany. Ireo sokatra ireo izay nafeniny tao an-dava-drano maina nofonosiny gony. Marihina fa tsy avy eto Antsirabe ilay lehilahy voasambotra nanaparitaka vola sandoka fa manao ny asa ratsiny no nahatongavany teto.
Nary ( Antsirabe )
Raha fihetsiketsehana ivelany dia hain’i Andry Rajoelina sy ny forongony tokoa, saingy rehefa tena dinihina lalina dia tsy manana olona ity “putschiste” ity. Porofon’izany, nitsangana ny governemanta Ntsay Christian, mbola ry Christine Razanamahasoa sy Augustin ...Tohiny